Mogadishu Journal » Cristiano Ronaldo Oo Rikoor Cusub Dhigaya
Sida ay maanta qortay jariirada Sunday Times, Ronaldo ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu horeeyay ee kubada cagta ee shaqeysta 100 milyan euro kaliya hal sanno gudaheed.
Lacagtaas tirada badan ayuu Ronaldo ka helayaa qandaraasyadii cusbaa ee uu u saxiixay Real Madrid iyo shirkada Nike. Kaliya sarre looma qaadin mushaharkiisa laakiin waxaa sidoo kale sarre u kacay lacagtii uu ka qaadanayay shirkada Nike.
Isbuucii hore 31 jirkaan ayaa shan sanno ku kordhiyay qandaraaskiisa Santiago Bernabeu. Heshiiskaas waxa uu Ronaldo ka dhigay xiddiga ugu mushaharka badan Los Blancos isagoo dhaafay rikoor uu isbuucii ka horeeyay dhigay Gareth Bale.
Ilo ay soo xiganeyso Sunday Times ayaa aaminsan in mushaharka aasaasiga ah ee xiddiga reer Portugal inuu gaarayo 48 milan euro sannadkii. Marka lag duro heshiiska Nike waxa uu sannadkii heli doonaa 100 milyan euro.
Waxaana ay taasi ka dhigeysaa Ronaldo xiddigii ugu horeeyay ee kubada cagta ee sannadkii shaqeysta in ka badan 100 milyan euro.